Sunday February 04, 2018 - 20:39:30 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Wasaaradda Maaliyada Dowladda Fedaraalka waaxda Canshuuraha Berriga,waxaa ka jiro musuq maasuq midkii ugu xumaa ebed.
Musuq Maasuq Xarkaha goostay ayaa buux dhaafiyay waaxda Canshuuraha berriga ee Wasaaradda maaliyada taas oo ah waax ballaran oo culeyskeeda leh sidoo kalena ah waax il dhaqaale ah oo dakhqli badani Dowladda ugu soo xaroodo kaas oo haddii sidii loogu tallo galay loo maamuli lahaa waxbadan ka tari lahayd baahiyaha dhaqaalaha.
Shaqaalaha ka shaqeeya Xafiisyada kala duwan ee aay ka kooban tahay Waaxda Canshuuraha Berriga ayaa sameestaywaraaqo been abuur ah, waxay foojar gareeyeen waraaqo u muuqal eg waraaqa wax lagu canshuuro iyaga oo halkaas ka sameestay dhaqaalo fara badan.
Dukumentiyo aan helnay ayaa muujinaya, in waraaqii loogu tala galay in lagu canshuuro Nootaayoyinka, shaqaalaha ka shaqeeya hareer dhigteen waraaqo kale oo Foojar ah si aay is daba marin ugu sameeyan.
Dhawaan waxaan idiin soo bandhigi doona waraaqo been abuura oohareer yaalla waraaqa saxda ah ee Canshuurta lagu qaado kuwaasi oo dadka loo jaro markii aay yimaadan xafiisyada meesha ugu daran ee musuq maasuqu ka socdo waa -waaxda nootaayoyinka Canshuurta!
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa waxba ka ogeyn Musuq maasuqa ka dhex jira waaxda Canshuuraha Berriga taaso ah dayac uu dayacay Masuuliyadii ka saarneyd ilaalinta amaanada shacabka ,oo la rabay in uu dabagal ku sameeyo Shaqaalaha ka shaqeeya Waaxyaha kala duwan ee aay ka kooban tahay Wasaaradda Maaliyada .
Shaqaalaha iyo Agaasimiyaasha Waaxda Canshuuraha Barriga ee Sameestay waraaqaha Foojarka ayaa qaata 100%50 lacagta soo gasha halkaasRa’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre , ayaa dhawaan yiri "Xukuumadaydu haba yaraatee wax dulqaad ah uma yeelan doonto musuqmaasuqa iyo wax-is-daba-marinta, isla markaana waxaan dadaal badan ku bixin doonaa sidii loo ciribtiri lahaa musuqa”. .